Politika momba ny fiainana manokana | WOWOW Faucets-WOWOW Faucets
Faucet fandroana malalaka
Fitaovana jiro anatiny
Fitaovana jiro ivelany
Fitaovana jiro amin'ny masoandro
Home / politika fiarovana fiainan'olona
Ahoana ny fanangonam-baovao Wowowfaucet.com momba ahy?
Manangona fampahalalana avy amin'ny mpampiasa tranonkala amin'ny fomba maro samihafa izahay, miaraka amin'ny tanjona dia hanome traikefa miantsena mahomby sy misy heviny ary namboarina. Ohatra, afaka mampiasa ny mombamomba anao manokana izahay:
* Soraty ary haingana ny fampahalalana efa nomenao teo aloha
* Manampy anao hahita haingana ny fampahalalana, ny vokatra ary ny serivisy
* Mamorona votoaty mifanaraka aminao
* Fampandrenesana aminao ny vaovao vaovao, ny vokatra ary serivisinao
Fisoratana anarana sy famandrihana: Raha te hampiasa ny ampahany amin'ity tranokala ity na ny vokatra famandrihana, ny mpanjifa rehetra dia tsy maintsy mameno takelaka fisoratana anarana amin'ny Internet miaraka amin'ny mombamomba anao, ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny, ny anaranao, ny lahy sy ny vavy, ny fandefasana ary ny adiresy faktioran (es), telefaona isa, adiresy mailaka ary nomeraon'ny carte de crédit. Ho fanampin'izany, azonay atao ny mangataka ny firenena onenananao sy / na ny firenena misy ny fikambanananao, hahafahanay manaraka ny lalàna sy ny lalàna mifehy. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina amin'ny faktiora, fanodinana lamina ary marketing anatiny ary koa mba hifandraisana aminao momba ny baikonao sy ny tranokalanay.
Adiresy mailaka: Toerana maro ao amin'ny tranokala mamela anao hiditra ny adiresy mailaka ho an'ny tanjona tafiditra fa tsy voafetra ny: misoratra anarana amin'ny fampandrenesana fampandrenesana maimaim-poana, mangataka fampandrenesana rehefa tonga ny marika na ny lamaody vaovao, na ny fisoratana anarana ho an'ny kaonty mailaka. Ankoatr'izay, ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana fampiratiana nokarakarain'ny Wowowfaucet.com dia an-tsitrapo tanteraka ary mitaky ny fampahafantarana ny mombamomba ny fifandraisana ilaina mba hampahafantarana ireo mpandresy sy loka. Azontsika atao ny mandefa ny anarana sy ny tanànan'ny mpifaninana amin'ny fifaninana ao amin'ny tranokalanay.
Famerenana ny vokatra: Mangataka adiresy mailaka sy toerana misy azy izahay sy ny fandefasana ny fandinihana ny vokatra rehetra. Ny adiresy mailakao dia hotehirizina manokana fa ny toerana misy anao dia ho hitan'ny mpampiasa hafa. Ny fampahalalana hafa rehetra izay nofidinao hateraka ho ampahany amin'ny famerenana dia ho azon'ny mpitsidika hafa mankany amin'ilay tranokala.
Ahoana ny fampiasana ny fampahalalana momba ahy manokana ny Wowowfaucet.com?
Fampiasana anatiny: Ampiasainay ny mombamomba anao manokana hanodinana ny filahanao sy hanomezana anao tolotra mpanjifa. Azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana manokana ataonao anatiny mba hanangonana vaovao ankapobeny momba ny mpitsidika amin'ity tranokala ity, hanatsarana ny atiny sy ny fandaharana ny tranokala, hanatsarana ny diantsika, ary tsenantsika ny serivisy sy ny vokatra.
Fifandraisana aminao: hampiasa ny mombamomba anao manokana izahay hifandraisana aminao momba ny Site sy ny baikonao. Ny mpanjifany rehetra dia mila manome adiresy mailaka ahafahana mifampiresaka amin'ny Wowowfaucet.com momba ny baiko napetraka. Azonao atao ny mandefa mailaka fanamafisana anao rehefa avy misoratra anarana aminay ianao ary koa ireo fampahafantarana mifandraika amin'ny serivisy raha ilaina (ohatra: fampiatoana ny serivisy mandritra ny fotoana fohy ho an'ny fikojakojana.) Azonao atao koa ny mametraka ny adiresy mailakao mba hangataka fampandrenesana rehefa mahazo marika vaovao izahay. fomba vokatra na vokatra, na hisoratra anarana amin'ny mailaka mailaka sy tolotra manokana. Azonao atao ny tsy misoratra anarana na mifidy mailaka amin'ny fotoana rehetra.
MIFANDRAISA AMINAY ADD: 8 THE GREEN STEA, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. USA TEL: (678) 740-3288 E-mail: sales@wowowfaucet.com